Aqua boribory lavalava
anaty rano Trampoline
anaty rano milina fitotoana
Aqua Bike- Mendri-kaja
Ny tena toe-ny Aqua Walker na ny fanaka 316L Stainless vy. Tsy foldable, toerana tsy nipetraka. Ny buoyancy ao anaty rano, manampy mampihena ny adin-tsaina eo amin'ny tonon-taolana ho an'ny azo antoka mampihatra. Noho ny rano ny mpanohitra, ny fomba tsara indrindra ny fanatratrarana ny cardio workout ary mijanòna mendrika. Mihazona ny kely famohana, mampiasa ny tanany sy ny tongony. Esory ny famohana kely, mampiasa ny tongotra ihany.
1. lafiny: 848x784x1120mm |
3. Gross Weight: 26kg
a) Frame: Stainless vy 316L, hatevin'ny vy sodina: 2.0mm
5. tena toetrany fitsaboana: Electrolytic fitaratra poloney
6. Warranty: 3 taona
7. Package: voahadihady mitafo fanitso baoritra, baoritra roa sosona, lafiny: 1130x900x210mm, 108SETS / 1x20GP.
Walker ny Aqua no vokarina-penitra Stainless vy AISI316L mampiseho manohitra ny harafesina fiarovana araka ny fenitra iraisam-pirenena. Ho etỳ ambonin'ny mampiasa ny vokatra electrolytic Nikosokosoka sy mpanohitra coating manimba tsikelikely ny antoka ny mateza sy ny hatsaran-tarehy ny vokatra.
Disassembled sy droa handrails endrika miantoka ny fiarovana ny fanatanjahan-tena. Mety amin'ny anti-panahy mba hampiofanana sy manana fitsaboana amin'ny rano ambanin'ny hany mihetsika.
Ny Aqua Walker dia azo ampiasaina amin'ny toerana isan-karazany toy ny Hotels, Spas, dobo filomanosana, Fitness Fahasalamana sy langilangy, Fialam-boly langilangy, Medical foibe, Home, Sekoly, Fanatanjahantena ekipa sy ny sisa.
Aqua Fitness vaovao dia karazana fonjam, dia hiara-mitondra Fitness saranga rehetra ao anaty rano. Aqua mendrika dia afaka manamafy orina batana asa, hampiroborobo ny fikorianan'ny ra sy ny metabolic fitsipika, mandritra izany hampihenana ny fahavoazana vokatry ny fanatanjahan-tena. Aqua Fitness dia tanterahina amin'ny Accessories isan-karazany (bisikileta, milina fitotoana, boribory lavalava mpampiofana, sns); dia mahafinaritra fanatanjahan-tena.
Ny Aqua Walker dia multifunctional fitaovana, natambatra ny soa azo avy amin'ny nivoy, cross-tany tia manao ski ambony, hanitsaka sy bisikileta, mamela niara fanofanana ny ranjo sy ny fitaovam-piadiana.
Izany no tena voalaza fa: levitra, ny fitsaboana ny vanin-taolana, fitsaboana ara-batana, sy ny valahana indray naratra, hazakazaka am-bisikileta fanofanana, Aqua Fitness, ny zokiolona, ary ara-batana rheumatic Fitness aretina amin'ny ankapobeny.
Previous: Aqua boribory lavalava
Aqua Swimming Pool Walker Fa
Aqua Walker Fa Swimming Poor
Phone: + 86-0532-8908 3155
Ampiana hoe: No.17,Yuehe Road,Konggang IndustrialPark,Liuting,Chengyang,Qingdao